646s Ijoni leMfazwe yanamhlanje kwiMfazwe yesibini yeHlabathi yamaNazi - Ngubani owayeza kuphumelela? images and subtitles
AmaNazi- ngaba ikhona into embi ngakumbi kulo mhlaba? Ewe, ewe, kwaye yile Zombies zamaNazi, kodwa ngethamsanqa asijongani nayo nayiphi na i-zombies yomjaho weenkosi namhlanje. Nope, endaweni yoko namhlanje sijongana nezinto eziphilayo, eziphefumlayo, kumalungiselelo ethu akutshanje Ngoobani abaza kuphumelela? Ijoni lanamhlanje okanye liMfazwe yesibini yeHlabathi? Umhla wowe-1941, kwaye imfazwe eYurophu iya ihamba ngokungxama kuAdolf Hitler. I-France yoyisiwe, iBritane yaphakanyiswa kubukumkani bayo obuncinci besiqithi, kunye nokucaphukisa ngokuchasene neSoviet yimpumelelo emangalisayo emva kwenye. Ngokuqinisekileyo ixesha lasentwasahlobo likaHitler- nokuba lixesha lokutshona- kwaye kwi-blitzkrieg I-ecstasy umphathi waseNazi uhlola iilebhu ezifihlakeleyo zamaNazi zakhela i-UFO enjineli enethiwekhi, Imfuza yobunjineli bemisonto eluhlaza ebomvu enezinwele ezi-blonde, kwaye kunjalo, lixesha umatshini wokuhlutha uEinstein kwaye umnyanzele ukuba akhe ibhombu yenyukliya yeJamani. Ethandabuza amabango akhe enzululwazi ukuba akhe umatshini wexesha elisebenzayo, uHitler uyabuza Omnye wabalindi bakhe ukuze ayizame. “Heyi, Hans,” utsho uHitler, “kutheni ungazithembi, unike ikamva eliqaqambileyo lesithathu Reich a peek, kwaye ubuye apha undixelele konke malunga nokumangalisa kweJamani yamaNazi Ngunyaka wama-2020? ” Akukho namnye wokuphoxisa uFuhrer wakhe, uHans ngamanqanaba amaNazi kumatshini wexesha waseJamani, kwaye ngokucinezela iqhosha, unyamalala kumoya omncinci! Kungo-2020 ngoku, kwaye uHans umNazi uphinde wafumana isms-dab embindini weRammstein yasemkhosini isiseko, isiseko esikhulu kunazo zonke phesheya kweMelika kunye ne-bulwark yamandla e-NATO eYurophu. Ukugoba ngqo kwijoni laseMelika, uHans uyaqonda ukuba ikamva lihambile ayilunganga, kwaye ngoku sele eza kungcamla isiphelo senkululeko yenkululeko njengoko sishiya uHans umNazi ngokuchaseneyo lijoni laseMelika lale mihla, ndifumanise ukuba ngubani oza kuphumelela. Siza kuluhlutha uqeqesho ngesixhobo ngasinye sejoni nganye, Ufumanise ukuba ngubani oza kuqala phezulu. Xa kuziwa kuqeqesho, ukufana phakathi kwejoni laseMelika lanamhlanje kunye nomNazi maninzi amajoni. Ijoni lamaNazi laliza kungena kuqeqesho olusisiseko ngolwazi oluphambili lwemipu nditsho neendlela ezithile zokukhulisa abantwana ngokubulela kokukhona kulutsha lukaHitler kwiJamani yamaNazi. Amakhwenkwe akhuthazwe kakhulu ukuba ajoyine ulutsha lukaHitler kwasekuqalekeni kweminyaka eli-14, inkqubo yobuzwe leyo yayiyinto efana noMfana Scouts eMelika- kuphela kugxininiso olukhulu kwikratshi lesizwe, ukuthiya amaJuda, nokufunda ukulwa. Ndibaleke ngeMfazwe Yehlabathi I amagqala, inzondo yokulahleka kweJamani yagxininiswa kwabaselula Izizukulwane, kwaye uHitler wayengekho isidenge- uchithe iminyaka elungiselela amakhwenkwe amaninzi aseJamani babe ngamajoni. IMelika yaseMelika ayinayo nayiphi na inkqubo enjalo, kwaye uninzi lwabantu abafundela emkhosini bavela eqhelekileyo, imvelaphi yoluntu. Nje ukuba bangene kuqeqesho lwasemkhosini, kodwa uqeqesho lwabo bobabini lwalufana kakhulu Ijoni elilihule liyakuhlala iiveki ezili-16 zoqeqesho lokuqala ngaphambi kokuba luthunyelwe kwiyunithi yalo baya kufumana uqeqesho olongezelelekileyo. Ijoni lethu lanamhlanje laseMelika liya kuthi lenze iiveki ezisi-8 zoqeqesho lokumguqula ndisuka eluntwini ndiye kwijoni, emva koko zongezwa iiveki ezili-16 zesikolo sabantwana mfundise ukuba alawule nayo nayiphi na indawo yokulwa. Amajoni amaNazi ayeneqeqesho oluhle kakhulu, olujikeleze zonke izibonelelo, kunye nokuxhamla kwamanqanaba eMfazwe Yehlabathi I ukufunda. Ngokungafaniyo nezinye izizwe, amajoni amaNazi nawo afumana uqeqesho lokuqhelana nezinye izixhobo ezo inokudityaniswa kwiyunithi yazo, ngakumbi umpu womatshini. Uqeqesho lwaseMelika lwale mihla lubonisa le modeli, kwaye umntu osuka eUnited States akaqheleki nje ngazo zonke izixhobo izixhobo zakhe ezinokuthwalwa, kodwa zihlala zilungele uninzi lwazo bonakalisa ubuchule bakhe. Kuyo yonke indawo, ijoni laseMelika langoku linamava ngakumbi kunangaphambi kwe-WWII yamaNazi ijoni lilishiya uqeqesho lwakuqala, kwaye ngelixa abaqeqeshwa abangamaNazi babenenzuzo yeMfazwe yeHlabathi Mna veterans, amajoni aseMelika anamhlanje anenzuzo yabaqeqeshi beterali abaye bachitha utyelelo oluninzi kwiingxabano eAfghanistan nase Iraq. Ukanti ijoni lamaNazi lalonwabele ukuxhamla kwinqanaba lokuziphatha ngakumbi, kwaye a Ukuqhelaniswa neembalasane zomkhosi eziqala kwiminyaka yakhe kulutsha lukaHitler. Xa kuziwa kuqeqesho, siza kuyibiza nokuba ngawo omabini amacala, kodwa ijoni lamaNazi kwaye iminyaka yakhe yobutshaba echithe kuLutsha lukaHitler iya kufumana umda ngaphezulu kweMelika yethu lijoni xa kuziwa kukuqina kunye nokuzimisela ukulwa. Kumlo wokulwa ngesandla, ijoni lethu laseMelika liya kuba lifumene ngakumbi, kwaye uqeqesho olungcono kunejoni lethu lamaNazi. Amajoni amaNazi ayenokulindela ukufunda ngeendlela ezithile ezisisiseko zokubambana ngezandla kunye namanqindi, kodwa kule mihla Amajoni aseMelika amashumi eminyaka afunde ngeendlela zobugcisa bemfazwe. Inkqubo yobukrelekrele nenobuqili yemfazwe, ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 wonke umkhosi wase-US Inkqubo yemidlalo yobugcisa yomtshato kwafuneka iphinde igxilwe ngenxa yokunqongophala koqeqesho ekuzinqandeni okungenabungozi ubuchule. Xa kufikwa kumlo wokulwa ngesandla, ijoni lethu laseMelika lihlala liphezulu, enkosi Ukuya kumashumi eminyaka yamava kunye nokuziqhelanisa noqeqesho kwezomkhosi. Omabini la majoni ayenokhetho olunye ngaphandle kwamanqindi angenanto kodwa, nakwisiqhulo umdlalo, abo balwa nathi bebeya kuguqukela ngokukhawuleza kwezi zixhobo zasesekondari ukuze baphumelele uloyiso. Ijoni lethu lamaNazi belingayiphatha i-seitengewehr 98 ishiya / i-bayonet. Ibandakanya intsimbi ephantse ibe li-15 intshi, eli litha libulalayo linokunamatheleka ngaphambili umpu njenge-bayonet. Amajoni aseMelika ahlala ephethe isitshetshe, kodwa eyona nto ibalulekileyo yiMelika isixhobo, okanye isixhobo se-e -ifutshane. Ifosholo esongelayo enemiphetho ebukhali emangazayo, isixhobo se-e-ivumela ukuba ijoni laseMelika likhawuleze uzenzele indawo yokulwa kuwo nawuphi na umhlaba, kodwa usebenza njengendawo entshabalalisayo yokwenene isixhobo. Ukutshixeka okukodwa ukusuka kwisixhobo se-e-eyokwaneleyo ukwahlula ikakayi yotshaba oluvulekileyo, okanye nokuhlangula I-concussion evumayo entloko ngesigcina-ntloko esikhuselayo. Ngokunikwa izibonelelo ezibonakalayo zesixhobo esixhobileyo esifutshane kunye nesixhobo esijikelezayo esifana nesembe, siya Ukuya kuphela ukunika ijoni lethu laseMelika ukuphumelela apha kuba nje kungafani neNazi ummese, isixhobo se-American e-sixhobo sinokusetyenziselwa ukumba ngokukhawuleza indawo yokulwa, ukunika Ukusebenziseka ngakumbi kwimeko yokulwa. Kwinqanaba elisondeleyo, ijoni lamaNazi lalisebenzisa i-icon yeWalther P38, ipistol eyathi yaduma njengoko amajoni oMdibaniso wabafuna njengezikhumbuzo zemfazwe. Kuyothusa ukuba i-P38 isasetyenziswa kwihlabathi jikelele, kubandakanya naseAfghanistan apho imikhosi yezokhuseleko iye yasebenzisa rhoqo ngokuchasene namajoni e-NATO. Ukudubula ibhulethi ye-9mm, iP38 inodidi oluphezulu lweemitha ezingama-50, kwaye ichanekile ngokwaneleyo ukuba nokudubula okusebenzayo okuyi-25-50 yeemitha. Ngomatshini wokuvala wombhobho oziimitha ezingama-320 ngomzuzwana, iP38 yayinamandla okumisa okumisa ubukhulu bayo obuncinci. Ngephephandaba ezisi-8 kuphela, I-P38 ngekhe ivumele ijoni lamaNazi Gcina umlilo ujolise kwithagethi ixesha elide, endaweni yokuba uxhomekeke ekuchanekeni hayi ivolumu umlilo. Ijoni lethu laseMelika libala i-Nazi P38 kunye neBeretta M9. Eyona nto ayithandayo kwezona midlalo ziBi zabahlali, i-M9 ibisenkonzweni ukusukela kwiminyaka yoo-1980. Isixhobo esithembeke kakhulu, i-M9 ipakisha ujikelezo lwe-9mm kunye nemagazini eli-15 ejikelezayo, inika ijoni lethu lanamhlanje likhulu ngokudubula ngaphambi kokufuna ukulayisha kwakhona. Isixhobo sine-muzzle velocity yeemitha ezingama-381 ngomzuzwana, ukuyinika ukungena okuthe kratya kune-Nazi P38, kwaye yayinoluhlu oluphezulu lokuphinda kabini isixhobo samaNazi, nge-100 iimitha kunye neemitha ezingama-50 zodidi oluphezulu olusebenzayo. Ngokuphinda kabini ngobuninzi kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kokudubula, kwaye kuphantse kabini amandla, i ukuphumelela apha ngokucacileyo kuya kwijoni laseMelika langoku kunye ne-M9 yakhe ethembekileyo. Ukuzibandakanya okuphakathi kunye nobude obude, ijoni lethu lamaNazi lithwala iKarabiner 98k, esemgangathweni khupha umpu wamajoni aseJamani kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. Umpu othembeke ngokuthembekileyo, i-K98k yabona isenzo kumadabi asuka e-Afrika ukuya umphambili waseRashiya ngaphambili, kwaye wawusebenza eludakeni nasemvuleni nakwikhephu nakwikhephu. Isixhobo sibonisa umjikelo we-7.92 mm wekhalori, oya kuzisa ukonzakala ukuba yabetha into ekujongwa kuyo ubungakanani bayo kunye ne-muzzle velocity ye-760 yeemitha ngomzuzwana. Umpu wawunodidi olusebenzayo lokudubula oluziimitha ezingama-500 ngokukhanya kwesinyithi, nangona kunjalo sahambisa umlilo ochanekileyo ngaphandle kweemitha ezili-1 000 ngombono we-teleskopu. Uluhlu oluphezulu lweemitha ezingama-4,700 luthetha ukuba nakwezona ndawo zixineneyo umpu unokuba nawo belingachanekanga, kodwa lisenokubulala ukuba umpu wenzeka emhlabeni ujolise. Ngelishwa umpu wanqunyanyiswa ngumthamo oyi-5, wawunika phantse akukho buchule Ukucinezela ithagethi. Endaweni yoko, ukugcinwa kweentsana zaseJamani kwaxhomekeka ngokuchanekileyo, kunye nokuhamba kunye nemipu yomatshini, ukungathathi cala imikhosi yotshaba. Ijoni lethu laseMelika liza naye uM4 Carbine owayethembekile kule mfazwe. Ngaphandle kwamahemuhemu okuchasene noko, i-M4 yenza kakuhle ngendlela eyahlukileyo kwiimeko ezahlukeneyo. kwaye nabani na owakhe wasebenzisa enye endle- endaweni yokufunda malunga nayo kwi-intanethi amanqaku- ayazi ukuba umpu awunangxaki yokudubula nokuba ufunyenwe ngongcoliseko kunye negrim. Apho umpu unyuka khona kufutshane kukumisa amandla, njengoko amagumbi engqukuva ngo-5.56 kwimagazini engamashumi amathathu ejikeleze ixesha elide ebizwa ngokuba yintsilelo ngabasebenza kuyo ngokunganikezeli amandla aneleyo okumisa ukubulala umjikelo wokuqala. Nangona kunjalo, i-muzzle velocity yayo ye-910 yeemitha ngomzuzwana odityaniswa kunye nensimbi yokungena kwensimbi Inika ukusebenza okuhle ngokuchasene nezixhobo zomzimba. Uluhlu oluphezulu olusebenzayo lweemitha ezingama-500 kwithagethi yenqaku, kunye neemitha ezingama-600 kuluhlu ithagethi mayinike ukufikelela okunokwenzeka. Ukongeza, i-M4 inika amandla okukhetha umlilo, okuvumela umsebenzisi ukuba angatshisi kunye Imijikelezo yomlilo obude obude obukude, okanye ukujikeleza kabini kwimijikelo yomlo okufutshane. Xa kuziwa kuluhlu, zombini imipu iboshwe zombini inodidi oluphezulu olusebenzayo kwithagethi- okanye kubungakanani bomntu ekujolise- kwiimitha ezingama-500 usebenzisa nje iintsimbi zentsimbi. Amajoni ethu ngeke alwe kakhulu ngaphandle kwalawo omnye komnye, kunjalo Ngapha koko oku akunantsingiselo ubukhulu becala kwaye kuya kuba nzima ukubona eyona nto ujolise kuyo. I-K98k igqitha iM-4 ngomjikelo wayo omkhulu ngakumbi, onokuba ngowonakalisayo xa usondele ukuya kwiindawo eziphakathi. Nangona kunjalo, isantya esisezantsi kakhulu se-muzzle veterity kune-M-4, ukubulawa komjikelo omkhulu kunciphisa kakhulu ukuqhubela phambili okuya kufuneka kuhamba- ukuya kwinqanaba lokuba lelokuqala okanye isibini sokudubula siya kumiswa ngokulula ngumkhosi oqhelekileyo wemfazwe ophethwe ngabantwana baseMelika apho Uluhlu oluninzi. Ngokuthelekisa, umthamo omkhulu wamaphephancwadi kunye nokudubula ngokukhawuleza kwe-M-4 nika ijoni laseMelika lanamhlanje ithuba elingenakuthelekiswa nanto kumlo womlilo, kunye nokukwazi Tshintshela kumjikelo wesi-3 wokuqhuma umlilo ukulungiselela indawo ekufutshane yekota. Ukwazi ukuhambisa imijikelezo emithathu yentshabalalo ngokutyibilikiswa enye kuthetha ukuba kufutshane kakhulu M4 ikhwaza i-K98k, kodwa ngobukhulu bayo obuphezulu beemagazini kunye nenqanaba lokudubula i-M-4 iza Phezulu eqongeni phakathi ukuya kumacala amade ngokunjalo. Ukuba ijoni lethu lamaNazi lenze ixesha lokuhamba ngembono yeteleskopu kodwa, yethu yaseMelika I -ryrymanman ibengcono ukuvala umgama ngokukhawuleza, ngoba i-K98k inokunikezela ngokuchanekileyo Umlilo kumqolo we-M4 awunathemba lokuchukumisa. Kufutshane kumanqanaba aphakathi, sinika ukuphumelela kwijoni laseMelika langoku. Kodwa kwinqanaba elide kakhulu, ukuphumelela kuya ngokulula kwijoni lamaNazi kunye nokukwazi kwakhe fikelela kwaye uchukumise umntu ukuya kuthi ga kumgama oziiyadi ezili-1 000 ngokuchanekileyo okumangalisayo. Ekugqibeleni, amaNazi ahamba-hamba nathi anethuba lokomelela ngokwasemzimbeni nasengqondweni Iminyaka yakhe echithwe kwiinkqubo zoqeqesho zolutsha zikaHitler, kwaye inethuba kuluhlu olude kakhulu lomlilo ngenxa yokuchaneka kunye noluhlu lwe-K98k umpu. Nangona kunjalo kuyo yonke enye indawo Ijoni laseMelika langoku lilawula, ngenxa yendaleko kwiinkqubo zoqeqesho kule minyaka ingama-80 idlulileyo kwaye ziphucule kakhulu izixhobo zanamhlanje. Mhlawumbi awuvumelani kodwa- yeyiphi kwezi zimbini ocinga ukuba iya kuphumelela u-nye ku-nye silwe kude kuse ekufeni? Sazise kumagqabantshintshi, kwaye ngoku ukuba usekupheleni, kutheni ungalindi Ipati eya ngokucofa ividiyo apha, okanye ungathanda ukubukela le ilapha endaweni?! Khawuleza ucofe enye, ngokungafaniyo nathi namhlanje.
Ijoni leMfazwe yanamhlanje kwiMfazwe yesibini yeHlabathi yamaNazi - Ngubani owayeza kuphumelela?
< start="0.329" dur="3.271"> AmaNazi- ngaba ikhona into embi ngakumbi kulo mhlaba? >
< start="3.6" dur="5.32"> Ewe, ewe, kwaye yile Zombies zamaNazi, kodwa ngethamsanqa asijongani nayo nayiphi na i-zombies yomjaho weenkosi >
< start="8.92" dur="1"> namhlanje. >
< start="9.92" dur="3.36"> Nope, endaweni yoko namhlanje sijongana nezinto eziphilayo, eziphefumlayo, kumalungiselelo ethu akutshanje >
< start="13.28" dur="1"> Ngoobani abaza kuphumelela? >
< start="14.28" dur="2.91"> Ijoni lanamhlanje okanye liMfazwe yesibini yeHlabathi? >
< start="17.19" dur="4.36"> Umhla wowe-1941, kwaye imfazwe eYurophu iya ihamba ngokungxama kuAdolf Hitler. >
< start="21.55" dur="4.27"> I-France yoyisiwe, iBritane yaphakanyiswa kubukumkani bayo obuncinci besiqithi, kunye nokucaphukisa >
< start="25.82" dur="3.31"> ngokuchasene neSoviet yimpumelelo emangalisayo emva kwenye. >
< start="29.13" dur="4.24"> Ngokuqinisekileyo ixesha lasentwasahlobo likaHitler- nokuba lixesha lokutshona- kwaye kwi-blitzkrieg >
< start="33.37" dur="5.17"> I-ecstasy umphathi waseNazi uhlola iilebhu ezifihlakeleyo zamaNazi zakhela i-UFO enjineli enethiwekhi, >
< start="38.54" dur="4.47"> Imfuza yobunjineli bemisonto eluhlaza ebomvu enezinwele ezi-blonde, kwaye kunjalo, lixesha >
< start="43.01" dur="4.25"> umatshini wokuhlutha uEinstein kwaye umnyanzele ukuba akhe ibhombu yenyukliya yeJamani. >
< start="47.26" dur="4.37"> Ethandabuza amabango akhe enzululwazi ukuba akhe umatshini wexesha elisebenzayo, uHitler uyabuza >
< start="51.63" dur="1.94"> Omnye wabalindi bakhe ukuze ayizame. >
< start="53.57" dur="3.64"> “Heyi, Hans,” utsho uHitler, “kutheni ungazithembi, unike ikamva eliqaqambileyo lesithathu >
< start="57.21" dur="3.8"> Reich a peek, kwaye ubuye apha undixelele konke malunga nokumangalisa kweJamani yamaNazi >
< start="61.01" dur="1.65"> Ngunyaka wama-2020? ” >
< start="62.66" dur="4.3"> Akukho namnye wokuphoxisa uFuhrer wakhe, uHans ngamanqanaba amaNazi kumatshini wexesha waseJamani, kwaye >
< start="66.96" dur="2.74"> ngokucinezela iqhosha, unyamalala kumoya omncinci! >
< start="69.7" dur="5.43"> Kungo-2020 ngoku, kwaye uHans umNazi uphinde wafumana isms-dab embindini weRammstein yasemkhosini >
< start="75.13" dur="5.03"> isiseko, isiseko esikhulu kunazo zonke phesheya kweMelika kunye ne-bulwark yamandla e-NATO eYurophu. >
< start="80.16" dur="4.68"> Ukugoba ngqo kwijoni laseMelika, uHans uyaqonda ukuba ikamva lihambile >
< start="84.84" dur="5.17"> ayilunganga, kwaye ngoku sele eza kungcamla isiphelo senkululeko yenkululeko njengoko sishiya uHans umNazi ngokuchaseneyo >
< start="90.01" dur="3.1"> lijoni laseMelika lale mihla, ndifumanise ukuba ngubani oza kuphumelela. >
< start="93.11" dur="4.14"> Siza kuluhlutha uqeqesho ngesixhobo ngasinye sejoni nganye, >
< start="97.25" dur="2.62"> Ufumanise ukuba ngubani oza kuqala phezulu. >
< start="99.87" dur="4.26"> Xa kuziwa kuqeqesho, ukufana phakathi kwejoni laseMelika lanamhlanje kunye nomNazi >
< start="104.13" dur="1.01"> maninzi amajoni. >
< start="105.14" dur="4.269"> Ijoni lamaNazi laliza kungena kuqeqesho olusisiseko ngolwazi oluphambili lwemipu >
< start="109.409" dur="5.121"> nditsho neendlela ezithile zokukhulisa abantwana ngokubulela kokukhona kulutsha lukaHitler kwiJamani yamaNazi. >
< start="114.53" dur="5.06"> Amakhwenkwe akhuthazwe kakhulu ukuba ajoyine ulutsha lukaHitler kwasekuqalekeni kweminyaka eli-14, inkqubo yobuzwe >
< start="119.59" dur="4.19"> leyo yayiyinto efana noMfana Scouts eMelika- kuphela kugxininiso olukhulu >
< start="123.78" dur="3.19"> kwikratshi lesizwe, ukuthiya amaJuda, nokufunda ukulwa. >
< start="126.97" dur="4.48"> Ndibaleke ngeMfazwe Yehlabathi I amagqala, inzondo yokulahleka kweJamani yagxininiswa kwabaselula >
< start="131.45" dur="5.03"> Izizukulwane, kwaye uHitler wayengekho isidenge- uchithe iminyaka elungiselela amakhwenkwe amaninzi aseJamani >
< start="136.48" dur="1.66"> babe ngamajoni. >
< start="138.14" dur="4.55"> IMelika yaseMelika ayinayo nayiphi na inkqubo enjalo, kwaye uninzi lwabantu abafundela emkhosini bavela >
< start="142.69" dur="1.57"> eqhelekileyo, imvelaphi yoluntu. >
< start="144.26" dur="3.9"> Nje ukuba bangene kuqeqesho lwasemkhosini, kodwa uqeqesho lwabo bobabini lwalufana kakhulu >
< start="148.16" dur="4.56"> Ijoni elilihule liyakuhlala iiveki ezili-16 zoqeqesho lokuqala ngaphambi kokuba luthunyelwe kwiyunithi yalo >
< start="152.72" dur="1.73"> baya kufumana uqeqesho olongezelelekileyo. >
< start="154.45" dur="3.81"> Ijoni lethu lanamhlanje laseMelika liya kuthi lenze iiveki ezisi-8 zoqeqesho lokumguqula >
< start="158.26" dur="4.74"> ndisuka eluntwini ndiye kwijoni, emva koko zongezwa iiveki ezili-16 zesikolo sabantwana >
< start="163" dur="2.53"> mfundise ukuba alawule nayo nayiphi na indawo yokulwa. >
< start="165.53" dur="5.039"> Amajoni amaNazi ayeneqeqesho oluhle kakhulu, olujikeleze zonke izibonelelo, kunye nokuxhamla kwamanqanaba eMfazwe Yehlabathi I >
< start="170.569" dur="1.181"> ukufunda. >
< start="171.75" dur="4.48"> Ngokungafaniyo nezinye izizwe, amajoni amaNazi nawo afumana uqeqesho lokuqhelana nezinye izixhobo ezo >
< start="176.23" dur="3.25"> inokudityaniswa kwiyunithi yazo, ngakumbi umpu womatshini. >
< start="179.48" dur="4.79"> Uqeqesho lwaseMelika lwale mihla lubonisa le modeli, kwaye umntu osuka eUnited States akaqheleki nje >
< start="184.27" dur="4.21"> ngazo zonke izixhobo izixhobo zakhe ezinokuthwalwa, kodwa zihlala zilungele uninzi lwazo >
< start="188.48" dur="1.08"> bonakalisa ubuchule bakhe. >
< start="189.56" dur="5.25"> Kuyo yonke indawo, ijoni laseMelika langoku linamava ngakumbi kunangaphambi kwe-WWII yamaNazi >
< start="194.81" dur="4.31"> ijoni lilishiya uqeqesho lwakuqala, kwaye ngelixa abaqeqeshwa abangamaNazi babenenzuzo yeMfazwe yeHlabathi >
< start="199.12" dur="4.03"> Mna veterans, amajoni aseMelika anamhlanje anenzuzo yabaqeqeshi beterali abaye bachitha >
< start="203.15" dur="3.02"> utyelelo oluninzi kwiingxabano eAfghanistan nase Iraq. >
< start="206.17" dur="4.211"> Ukanti ijoni lamaNazi lalonwabele ukuxhamla kwinqanaba lokuziphatha ngakumbi, kwaye a >
< start="210.381" dur="4.619"> Ukuqhelaniswa neembalasane zomkhosi eziqala kwiminyaka yakhe kulutsha lukaHitler. >
< start="215" dur="4.04"> Xa kuziwa kuqeqesho, siza kuyibiza nokuba ngawo omabini amacala, kodwa ijoni lamaNazi >
< start="219.04" dur="4.41"> kwaye iminyaka yakhe yobutshaba echithe kuLutsha lukaHitler iya kufumana umda ngaphezulu kweMelika yethu >
< start="223.45" dur="2.71"> lijoni xa kuziwa kukuqina kunye nokuzimisela ukulwa. >
< start="226.16" dur="4.56"> Kumlo wokulwa ngesandla, ijoni lethu laseMelika liya kuba lifumene ngakumbi, kwaye uqeqesho olungcono >
< start="230.72" dur="1.48"> kunejoni lethu lamaNazi. >
< start="232.2" dur="4.21"> Amajoni amaNazi ayenokulindela ukufunda ngeendlela ezithile ezisisiseko zokubambana ngezandla kunye namanqindi, kodwa kule mihla >
< start="236.41" dur="3.94"> Amajoni aseMelika amashumi eminyaka afunde ngeendlela zobugcisa bemfazwe. >
< start="240.35" dur="5.04"> Inkqubo yobukrelekrele nenobuqili yemfazwe, ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 wonke umkhosi wase-US >
< start="245.39" dur="5.179"> Inkqubo yemidlalo yobugcisa yomtshato kwafuneka iphinde igxilwe ngenxa yokunqongophala koqeqesho ekuzinqandeni okungenabungozi >
< start="250.569" dur="1"> ubuchule. >
< start="251.569" dur="3.911"> Xa kufikwa kumlo wokulwa ngesandla, ijoni lethu laseMelika lihlala liphezulu, enkosi >
< start="255.48" dur="3.619"> Ukuya kumashumi eminyaka yamava kunye nokuziqhelanisa noqeqesho kwezomkhosi. >
< start="259.099" dur="4.581"> Omabini la majoni ayenokhetho olunye ngaphandle kwamanqindi angenanto kodwa, nakwisiqhulo >
< start="263.68" dur="4.419"> umdlalo, abo balwa nathi bebeya kuguqukela ngokukhawuleza kwezi zixhobo zasesekondari ukuze baphumelele uloyiso. >
< start="268.099" dur="4.111"> Ijoni lethu lamaNazi belingayiphatha i-seitengewehr 98 ishiya / i-bayonet. >
< start="272.21" dur="4.01"> Ibandakanya intsimbi ephantse ibe li-15 intshi, eli litha libulalayo linokunamatheleka ngaphambili >
< start="276.22" dur="1.749"> umpu njenge-bayonet. >
< start="277.969" dur="4.44"> Amajoni aseMelika ahlala ephethe isitshetshe, kodwa eyona nto ibalulekileyo yiMelika >
< start="282.409" dur="1.69"> isixhobo, okanye isixhobo se-e -ifutshane. >
< start="284.099" dur="5.011"> Ifosholo esongelayo enemiphetho ebukhali emangazayo, isixhobo se-e-ivumela ukuba ijoni laseMelika likhawuleze >
< start="289.11" dur="5.07"> uzenzele indawo yokulwa kuwo nawuphi na umhlaba, kodwa usebenza njengendawo entshabalalisayo yokwenene >
< start="294.18" dur="1"> isixhobo. >
< start="295.18" dur="3.93"> Ukutshixeka okukodwa ukusuka kwisixhobo se-e-eyokwaneleyo ukwahlula ikakayi yotshaba oluvulekileyo, okanye nokuhlangula >
< start="299.11" dur="3.229"> I-concussion evumayo entloko ngesigcina-ntloko esikhuselayo. >
< start="302.339" dur="4.63"> Ngokunikwa izibonelelo ezibonakalayo zesixhobo esixhobileyo esifutshane kunye nesixhobo esijikelezayo esifana nesembe, siya >
< start="306.969" dur="4.95"> Ukuya kuphela ukunika ijoni lethu laseMelika ukuphumelela apha kuba nje kungafani neNazi >
< start="311.919" dur="4.15"> ummese, isixhobo se-American e-sixhobo sinokusetyenziselwa ukumba ngokukhawuleza indawo yokulwa, ukunika >
< start="316.069" dur="2.84"> Ukusebenziseka ngakumbi kwimeko yokulwa. >
< start="318.909" dur="5.4"> Kwinqanaba elisondeleyo, ijoni lamaNazi lalisebenzisa i-icon yeWalther P38, ipistol eyathi yaduma >
< start="324.309" dur="3.461"> njengoko amajoni oMdibaniso wabafuna njengezikhumbuzo zemfazwe. >
< start="327.77" dur="4.269"> Kuyothusa ukuba i-P38 isasetyenziswa kwihlabathi jikelele, kubandakanya naseAfghanistan apho >
< start="332.039" dur="3.59"> imikhosi yezokhuseleko iye yasebenzisa rhoqo ngokuchasene namajoni e-NATO. >
< start="335.629" dur="4.801"> Ukudubula ibhulethi ye-9mm, iP38 inodidi oluphezulu lweemitha ezingama-50, kwaye ichanekile ngokwaneleyo >
< start="340.43" dur="3.43"> ukuba nokudubula okusebenzayo okuyi-25-50 yeemitha. >
< start="343.86" dur="5.33"> Ngomatshini wokuvala wombhobho oziimitha ezingama-320 ngomzuzwana, iP38 yayinamandla okumisa okumisa >
< start="349.19" dur="1.279"> ubukhulu bayo obuncinci. >
< start="350.469" dur="4.521"> Ngephephandaba ezisi-8 kuphela, I-P38 ngekhe ivumele ijoni lamaNazi >
< start="354.99" dur="5.399"> Gcina umlilo ujolise kwithagethi ixesha elide, endaweni yokuba uxhomekeke ekuchanekeni hayi ivolumu >
< start="360.389" dur="1"> umlilo. >
< start="361.389" dur="3.691"> Ijoni lethu laseMelika libala i-Nazi P38 kunye neBeretta M9. >
< start="365.08" dur="5.079"> Eyona nto ayithandayo kwezona midlalo ziBi zabahlali, i-M9 ibisenkonzweni ukusukela kwiminyaka yoo-1980. >
< start="370.159" dur="5.48"> Isixhobo esithembeke kakhulu, i-M9 ipakisha ujikelezo lwe-9mm kunye nemagazini eli-15 ejikelezayo, inika >
< start="375.639" dur="3.691"> ijoni lethu lanamhlanje likhulu ngokudubula ngaphambi kokufuna ukulayisha kwakhona. >
< start="379.33" dur="5.199"> Isixhobo sine-muzzle velocity yeemitha ezingama-381 ngomzuzwana, ukuyinika ukungena okuthe kratya >
< start="384.529" dur="5.85"> kune-Nazi P38, kwaye yayinoluhlu oluphezulu lokuphinda kabini isixhobo samaNazi, nge-100 >
< start="390.379" dur="3.051"> iimitha kunye neemitha ezingama-50 zodidi oluphezulu olusebenzayo. >
< start="393.43" dur="4.34"> Ngokuphinda kabini ngobuninzi kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kokudubula, kwaye kuphantse kabini amandla, i >
< start="397.77" dur="4.289"> ukuphumelela apha ngokucacileyo kuya kwijoni laseMelika langoku kunye ne-M9 yakhe ethembekileyo. >
< start="402.059" dur="5.381"> Ukuzibandakanya okuphakathi kunye nobude obude, ijoni lethu lamaNazi lithwala iKarabiner 98k, esemgangathweni >
< start="407.44" dur="2.9"> khupha umpu wamajoni aseJamani kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. >
< start="410.34" dur="5.309"> Umpu othembeke ngokuthembekileyo, i-K98k yabona isenzo kumadabi asuka e-Afrika ukuya >
< start="415.649" dur="5.04"> umphambili waseRashiya ngaphambili, kwaye wawusebenza eludakeni nasemvuleni nakwikhephu nakwikhephu. >
< start="420.689" dur="5"> Isixhobo sibonisa umjikelo we-7.92 mm wekhalori, oya kuzisa ukonzakala ukuba >
< start="425.689" dur="4.591"> yabetha into ekujongwa kuyo ubungakanani bayo kunye ne-muzzle velocity ye-760 yeemitha ngomzuzwana. >
< start="430.28" dur="4.219"> Umpu wawunodidi olusebenzayo lokudubula oluziimitha ezingama-500 ngokukhanya kwesinyithi, nangona kunjalo >
< start="434.499" dur="4.051"> sahambisa umlilo ochanekileyo ngaphandle kweemitha ezili-1 000 ngombono we-teleskopu. >
< start="438.55" dur="4.959"> Uluhlu oluphezulu lweemitha ezingama-4,700 luthetha ukuba nakwezona ndawo zixineneyo umpu unokuba nawo >
< start="443.509" dur="4.53"> belingachanekanga, kodwa lisenokubulala ukuba umpu wenzeka emhlabeni ujolise. >
< start="448.039" dur="4.74"> Ngelishwa umpu wanqunyanyiswa ngumthamo oyi-5, wawunika phantse akukho buchule >
< start="452.779" dur="1.47"> Ukucinezela ithagethi. >
< start="454.249" dur="4.72"> Endaweni yoko, ukugcinwa kweentsana zaseJamani kwaxhomekeka ngokuchanekileyo, kunye nokuhamba kunye nemipu yomatshini, ukungathathi cala >
< start="458.969" dur="1.23"> imikhosi yotshaba. >
< start="460.199" dur="3.55"> Ijoni lethu laseMelika liza naye uM4 Carbine owayethembekile kule mfazwe. >
< start="463.749" dur="4.88"> Ngaphandle kwamahemuhemu okuchasene noko, i-M4 yenza kakuhle ngendlela eyahlukileyo kwiimeko ezahlukeneyo. >
< start="468.629" dur="4.57"> kwaye nabani na owakhe wasebenzisa enye endle- endaweni yokufunda malunga nayo kwi-intanethi >
< start="473.199" dur="5.25"> amanqaku- ayazi ukuba umpu awunangxaki yokudubula nokuba ufunyenwe ngongcoliseko kunye negrim. >
< start="478.449" dur="4.62"> Apho umpu unyuka khona kufutshane kukumisa amandla, njengoko amagumbi engqukuva ngo-5.56 >
< start="483.069" dur="4.71"> kwimagazini engamashumi amathathu ejikeleze ixesha elide ebizwa ngokuba yintsilelo ngabasebenza kuyo >
< start="487.779" dur="3.36"> ngokunganikezeli amandla aneleyo okumisa ukubulala umjikelo wokuqala. >
< start="491.139" dur="5.721"> Nangona kunjalo, i-muzzle velocity yayo ye-910 yeemitha ngomzuzwana odityaniswa kunye nensimbi yokungena kwensimbi >
< start="496.86" dur="2.759"> Inika ukusebenza okuhle ngokuchasene nezixhobo zomzimba. >
< start="499.619" dur="5.44"> Uluhlu oluphezulu olusebenzayo lweemitha ezingama-500 kwithagethi yenqaku, kunye neemitha ezingama-600 kuluhlu >
< start="505.059" dur="2.181"> ithagethi mayinike ukufikelela okunokwenzeka. >
< start="507.24" dur="4.509"> Ukongeza, i-M4 inika amandla okukhetha umlilo, okuvumela umsebenzisi ukuba angatshisi kunye >
< start="511.749" dur="4.931"> Imijikelezo yomlilo obude obude obukude, okanye ukujikeleza kabini kwimijikelo yomlo okufutshane. >
< start="516.68" dur="4.31"> Xa kuziwa kuluhlu, zombini imipu iboshwe zombini inodidi oluphezulu olusebenzayo >
< start="520.99" dur="4.96"> kwithagethi- okanye kubungakanani bomntu ekujolise- kwiimitha ezingama-500 usebenzisa nje iintsimbi zentsimbi. >
< start="525.95" dur="3.76"> Amajoni ethu ngeke alwe kakhulu ngaphandle kwalawo omnye komnye, kunjalo >
< start="529.71" dur="4.17"> Ngapha koko oku akunantsingiselo ubukhulu becala kwaye kuya kuba nzima ukubona eyona nto ujolise kuyo. >
< start="533.88" dur="5.01"> I-K98k igqitha iM-4 ngomjikelo wayo omkhulu ngakumbi, onokuba ngowonakalisayo xa usondele >
< start="538.89" dur="1.19"> ukuya kwiindawo eziphakathi. >
< start="540.08" dur="4.36"> Nangona kunjalo, isantya esisezantsi kakhulu se-muzzle veterity kune-M-4, ukubulawa komjikelo omkhulu >
< start="544.44" dur="4.21"> kunciphisa kakhulu ukuqhubela phambili okuya kufuneka kuhamba- ukuya kwinqanaba lokuba lelokuqala okanye >
< start="548.65" dur="4.68"> isibini sokudubula siya kumiswa ngokulula ngumkhosi oqhelekileyo wemfazwe ophethwe ngabantwana baseMelika apho >
< start="553.33" dur="1.2"> Uluhlu oluninzi. >
< start="554.53" dur="4.47"> Ngokuthelekisa, umthamo omkhulu wamaphephancwadi kunye nokudubula ngokukhawuleza kwe-M-4 nika >
< start="559" dur="4.41"> ijoni laseMelika lanamhlanje ithuba elingenakuthelekiswa nanto kumlo womlilo, kunye nokukwazi >
< start="563.41" dur="2.98"> Tshintshela kumjikelo wesi-3 wokuqhuma umlilo ukulungiselela indawo ekufutshane yekota. >
< start="566.39" dur="4.49"> Ukwazi ukuhambisa imijikelezo emithathu yentshabalalo ngokutyibilikiswa enye kuthetha ukuba kufutshane kakhulu >
< start="570.88" dur="5.33"> M4 ikhwaza i-K98k, kodwa ngobukhulu bayo obuphezulu beemagazini kunye nenqanaba lokudubula i-M-4 iza >
< start="576.21" dur="2.98"> Phezulu eqongeni phakathi ukuya kumacala amade ngokunjalo. >
< start="579.19" dur="4.54"> Ukuba ijoni lethu lamaNazi lenze ixesha lokuhamba ngembono yeteleskopu kodwa, yethu yaseMelika >
< start="583.73" dur="4.13"> I -ryrymanman ibengcono ukuvala umgama ngokukhawuleza, ngoba i-K98k inokunikezela ngokuchanekileyo >
< start="587.86" dur="2.83"> Umlilo kumqolo we-M4 awunathemba lokuchukumisa. >
< start="590.69" dur="4.02"> Kufutshane kumanqanaba aphakathi, sinika ukuphumelela kwijoni laseMelika langoku. >
< start="594.71" dur="4.59"> Kodwa kwinqanaba elide kakhulu, ukuphumelela kuya ngokulula kwijoni lamaNazi kunye nokukwazi kwakhe >
< start="599.3" dur="4.49"> fikelela kwaye uchukumise umntu ukuya kuthi ga kumgama oziiyadi ezili-1 000 ngokuchanekileyo okumangalisayo. >
< start="603.79" dur="4.55"> Ekugqibeleni, amaNazi ahamba-hamba nathi anethuba lokomelela ngokwasemzimbeni nasengqondweni >
< start="608.34" dur="4.57"> Iminyaka yakhe echithwe kwiinkqubo zoqeqesho zolutsha zikaHitler, kwaye inethuba >
< start="612.91" dur="5.12"> kuluhlu olude kakhulu lomlilo ngenxa yokuchaneka kunye noluhlu lwe-K98k umpu. >
< start="618.03" dur="4.48"> Nangona kunjalo kuyo yonke enye indawo Ijoni laseMelika langoku lilawula, ngenxa yendaleko >
< start="622.51" dur="4.71"> kwiinkqubo zoqeqesho kule minyaka ingama-80 idlulileyo kwaye ziphucule kakhulu izixhobo zanamhlanje. >
< start="627.22" dur="4.54"> Mhlawumbi awuvumelani kodwa- yeyiphi kwezi zimbini ocinga ukuba iya kuphumelela u-nye ku-nye >
< start="631.76" dur="1.19"> silwe kude kuse ekufeni? >
< start="632.95" dur="3.55"> Sazise kumagqabantshintshi, kwaye ngoku ukuba usekupheleni, kutheni ungalindi >
< start="636.5" dur="4.93"> Ipati eya ngokucofa ividiyo apha, okanye ungathanda ukubukela le ilapha >
< start="641.43" dur="1"> endaweni?! >
< start="642.43" dur="3.13"> Khawuleza ucofe enye, ngokungafaniyo nathi namhlanje. >